Ilay voaozona amin'ny tany - Frantz Fanon - Afrikhepri Fondation
Ireo voaozona amin'ny tany - Frantz Fanon
LNy voaozona amin'ny tany no boky farany an'ny Frantz Fanon, namoaka andro vitsivitsy talohan'ny nahafatesany Famoahana maspero en 1961 ary nadika ho 15 fiteny. Ity lahatsoratra fanadihadiana ity dia manadihady ny fanjanahantany, ny fialan'ny mpanjanaka ary ny ady fanafahana. Mandalina ny anjara asan'ny herisetra teo amin'ny mpanjanatany sy ny mpanjanatany izy. Miaro ny tolona fanoherana ny fanjanahan-tany izy amin'ny alàlan'ny herisetra sy ny fanafahana ny Tontolo Fahatelo. Navoitran'ity boky ity ihany koa tamin'ny alàlan'ny fomba amam-piandohana ireo fifanoherana misy amin'ny fampiasana fahefana amin'ny vanim-potoana taorian'ny fanjanahantany tany Afrika..
Voasoratra tsara ady alzeriana, voarara tamin'ny famotsorana azy, izy io dia nanjary referansa ho an'ny hetsika fanafahana fanoherana ny fanjanahan-tany sy ny fizakan-tena. Ity boky ity dia malaza amin'ny fampidirana nosoratan'i Jean-Paul Sartre.
"Ny herisetra nitarika ny fandaminana ny tontolo fanjanahantany, izay tsy nanasasatra nanasongadina ny fanimbana ireo endrika sosialy vazimba teratany, dia noravana tsy nisy fameperana ny rafitry ny toekarena, ny fomba fisehoana, ny fitafiana, hotakiana ary heverin'ny mpanjanatany rehefa, manapa-kevitra ny ho tantara amin'ny asany, ny vahoaka mpanjanaka dia hirohotra mankao amin'ireo tanàna voarara. Ny fipoahana ny tontolon'ny fanjanahan-tany dia endrika fihetsika mazava be izao, takatry ny saina ary azo raisin'ny olona tsirairay mandrafitra ny vahoaka mpanjanatany. " Frantz Fanon.
Navoaka tamin'ny 1961, tamin'ny fotoana namoahana herisetra fanjanahan-tany tamin'ny ady Alzeriana, nisesy tamin'ny fotoana maro rehefa navoakan'i Éditions François Maspero, ny boky nosoratan'i Jean-Paul Sartre, dia nanana lahatra miavaka. Izy io dia nanompo ary mbola miasa ankehitriny ho aingam-panahy sy loharanom-pahalalana ho an'ny mpikatroka mafana fo manohitra ny fanjanahantany. Ny fandinihany ny ratra nahazo ny mpanjanatany tao anatin'ny rafitry ny rafitra mpanjanatany sy ny tetikadiny utopiana an'ny tontolo fahatelo revolisionera mitondra olom-baovao dia mijanona ho kilalao lehibe amin'ny fanindrahindram-pirenena fahatelo, ny asa-tanana sy ny testamenta politika an'i Frantz Fanon.
Amin'ity fanontana vaovao ity, ny sasin-teny nataon'i Alice Cherki, mpitsabo aretin-tsaina sy mpitsabo aretin-tsaina, mpanoratra ny Sarintanin'i Frantz Fanon (Seuil, 2000), ary ny teny faneva nataon'i Mohammed Harbi, mpiady voalohany ho an'ny fanafahana ny fireneny sy mpahay tantara ny Algeria ankehitriny, mpanoratra ny fiainana maharitra. Fahatsiarovana ara-politika 1945-1962 (La Découverte, 2001), mamerina ny maha-zava-dehibe ny eritreritr'i Frantz Fanon ankehitriny.
Ireo voaheloka ny tany
Vidio € 2,99
Nohavaozina farany tamin'ny 15 aprily 2021 8:27 maraina
sokajy BOKY VOALAZA
Tsy ho faty tao amin'ny tranony i Hilter fa nitsoaka tany Arzantina
Resadresaka nifanaovana tamin'i Alain Mabanckou (Lahatsary)
Vehivavy tera-bolo, volo voajanahary lamaody (Video)